Sida looga fogaado in lagu khiyaaneeyo markii aad kiraysaneysid guri | Wararka Safarka
Sida looga fogaado in lagu khiyaaneeyo markaad kireysato guri
Isabel Catalan | | Guryaha, Talooyin
Si maalmo yar oo fasax ah loo qaato, kiraysiga guri dabaq ah waa mid ka mid ah ilaha ugu badan ee ay dalbadaan dadka safarka ahi Meel si fiican ugu taal bartamaha, raaxo leh, qurux badan oo la awoodi karo ayaa ah astaamaha loogu baahan yahay markay tahay kirada. Internetka waxaa ku yaalo degello badan oo bixiya aqallo aan dhammaanayn noocyadooda kala duwan laakiin sida maahmaahda caanka ahi tiraahdo 'dhammaan kuwa dhalaalayaa dahab ma aha', marka waa inaad aad uga taxaddartaa inaad ka fogaato in lagu khiyaaneeyo markaad kireysato.
Si looga fogaado inaad noqotid dhibane khiyaano, waxaan kugula talineynaa inaad aqriso talooyinka soo socda oo wax weyn ka tari doona markaad kireysato guri fasax ah.
1 Faahfaahinta xiriirka shisheeyaha
2 Booqo guriga
3 Isbarbar dhig qiimaha
4 Celceliska qiimaha aagga
5 Hubi faallooyinka kuwa kale
6 Suurtagalnimada in la joojiyo boos celinta
7 Saxiix heshiis
8 Had iyo jeer hubi lacag bixinta
9 Hubi alaabada
10 Ka taxaddar heshiisyada degdegga ah
Faahfaahinta xiriirka shisheeyaha
Hal tilmaan oo nooga digaya khayaanada suurtagalka ah ayaa ah in mulkiiluhu uu sheegto inuu ku nool yahay dibedda oo uusan na tusi karin guriga shaqsi ahaan ama inuu furayaasha noogu soo diri doono warqad. Hadday wax sidan oo kale ah dhacaan waa inaan ka shakisanahay maxaa yeelay kiisaskan waa iska caadi milkiilaha inuu helo adeegyo wakaalad wakiil ka ah oo haysata furayaasha guriga ama gacan ka helida qof wajiga muuqda si uu u fuliyo qalliinka.
Haddii aad fursad u leedahay inaad booqato aqalka intaadan kireysan ka hor, waxaa lagugula talinayaa inaad sidaas sameysid. Sidan ayaad ku hubinaysaa in aqalku runtii haysto qalabkii lagu soo bandhigay xayeysiinta. Haddii ikhtiyaarkan aysan suurta gal ahayn, waxaa ugu wanaagsan in si toos ah loola hadlo milkiilaha oo laga codsado inuu kuu soo diro qaar ka mid ah sawirrada qolalka guriga: qolalka, qalabka guryaha, qalabka guryaha, iwm.
Shakiga gal hadii aad dareento in sawirada guriga laga soo guuriyay degel kale, hadii ay leeyihiin calaamado-biyood ama haddii ay isku mid yihiin kuwa aad ku aragtay xayaysiisyada kale.
Isbarbar dhig qiimaha
Kahor shaqaalaynta waxaa lagugula talinayaa inaad isbarbar dhigto qiimayaasha kujira degellada kaladuwan. Kuwa hoose ayaa badiyaa lala xiriiriyaa xaalado adag iyo dabacsanaan yar. Ka taxaddar gorgortanka iyo xayeysiinta aan sawir lahayn.
Celceliska qiimaha aagga
Hubso inaad ogtahay celceliska qiimaha aagga uu gurigu ku yaal si aad u ogaato haddii waxa aad bixinayso ay la jaan qaadayaan waxa mulkiiluhu codsanayo. Way habboon tahay in la adeegsado Sawirada Google si loo arko haddii sawirrada lagu soo diray ay u dhigmaan hoyga. Sidan oo kale waxaad awoodi doontaa inaad hubiso masaafada udhaxeysa meelaha xiisaha leh ee magaalada iyo guriga (meelaha firaaqada ah, magaalada hore, xeebta ...).
Hubi faallooyinka kuwa kale
Kahor kiraysiga guriga waxaa fiican inaad aqriso fikradaha isticmaaleyaasha kale ee ku saabsan aqalka dalxiiska. Khibrada dadka kale waxay na siin kartaa fikrado ku saabsan waxa aan shaqaalaysiin doonno iyo waxa aan heli doonno markay na siiyaan furayaasha.
Suurtagalnimada in la joojiyo boos celinta
Haddii ay dhacdo inaad caadiyan u bartay inaad ballansato hoygaaga waqti hore, waxa ugu fiican ayaa ah inaad isku daydo inaad kala xaajooto suurtagalnimada ah inaad joojiso boos celinta waqti cayiman gudahood adiga oo aan kharash dheeraad ah bixin. Marna ma ogaan kartid dhacdooyinka lama filaan ah ee aad yeelan karto markii aad kiraysaneysid waqti hore.
Saxeexida heshiiska kirada markasta waxay sahlaysaa waxyaabaha haddii ay xumaadaan. Qandaraaskan waa inaad ku muujisaa maalmaha joogitaanku socon doono, qadarka kirada iyo xitaa tan dhigaalka ama bixinta hore.
Had iyo jeer hubi lacag bixinta
Waad ka fogaan kartaa in lagu khiyaaneeyo markii aad kiraysaneysid guri adoo bixinaya lacag bixinta si aamin ah. Ha aaminin haddii mulkiilaha la sheegayo uu codsado in lacag bixinta loogu sameeyo adeegyo aan lagaranayn sababta oo ah in sidaas la yeelo aad bay u adkaan doontaa in laga soo kabto. Waxa ugu haboon ayaa ah in lagu bixiyo kaar ama lagu sameeyo bangiyo tan iyo markii bangiyada ay ka noqon karaan howlgalka.
Sidoo kale hubi in bangiga ay tahay in loo diro macaamilku inuu yahay jinsiyad la mid ah milkiilaha guriga iyo in milkiilaha koontada halka lacagta lagu shubo ay la mid tahay milkiilaha guriga.
Mararka qaarkood marka la dhiibo furayaasha waxaa sidoo kale la bixiyaa tiro alaab ah iyo alaabooyin kale oo guriga uu ku qalabaysan yahay. Kahor intaadan saxiixin heshiiska, waxaa lagugula talinayaa inaad hubiso in guriga uu leeyahay wax kasta oo tirakoobka ku qoran iyo haddii kale, ogeysii milkiilaha cilladaha aad aragtay.
Ka taxaddar heshiisyada degdegga ah
Ku degdega inaad xirto heshiiska waa inuu suulashaada saarnaa. Dembiileyaasha internetka marwalba waxay rabaan inay sida ugu dhakhsaha badan u sameeyaan.
Ugu dambeyntiina, haddii aad u aragto in hantida la xayeysiiyay ay tahay khiyaano ama in lagu khiyaameeyay dacwad aad u gudbisay booliska, macluumaadka aad bixiso ayaa u oggolaan doona inay macluumaad dheeraad ah ka helaan kuwa wax khiyaameeya oo ay xiraan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » safarka » Talooyin » Sida looga fogaado in lagu khiyaaneeyo markaad kireysato guri
Lacuniacha, dabeecadda dhalaalaysa